१६ वर्षमा विवाह, १७ वर्षमा आमा- शिक्षाको अवसर ? – Nepal Japan
१६ वर्षमा विवाह, १७ वर्षमा आमा- शिक्षाको अवसर ?
नेपाल जापान २२ पुष १२:४८
म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाकी २० वर्षीया सरु रसाइली आमा बनेको तीन वर्ष भयो । १६ वर्षको उमेरमा भागी विवाह गरेकी मालिका–१ निस्कोट माइती भएकी सरु १७ वर्षमै आमा बन्नुभएको हो ।
पन्ध्र वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी मुनाकै २५ वर्षीया यामकुमारी पुन दुई सन्तानकी आमा बनिसक्नुभएको छ । “नाैँ कक्षा पढ्दापढ्दै विवाह भयो”, पुनले भन्नुभयो, “बिहेपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन ।”
उन्नाइस वर्षको हुँदा विवाह गरेकी पूर्णकला पुनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरे पनि त्यसभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गर्न विवाह गरेकै कारण बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । दुई सन्तानकी आमा बनिसक्नुभएकी पूर्णकलाले उमेर नपुग्दै गर्भवती र सुत्केरी हुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
सरु, यामकुमारी र पूर्णकलालाई बालविवाह गरेकामा पछुतो लागेको छ । शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्क नहुँदै विवाह गरेका कारण श्रीमान श्रीमतीले एक–अर्कालाई बुझ्ने विषयमा एकरुपता नहुँदा झगडा हुने गरेको उहाँहरुको अनुभव छ । आफूहरुले भोगेको पीडा अरुलाई नपरोस् भनेर दश वर्षअघि बालविवाह गरेका अहिले सङ्गठित भएर बालविवाहविरुद्धको अभियानमा जुटेका छन् ।
“कानुनी हिसाबले अपराध मानिने बालविवाह गर्दा आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक र सामाजिकरुपमा धेरै क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ”, सरुले भन्नुभयो, “हामीलाई जस्तो समस्या नपरोस् भनेर बेलैमा सचेत बनाउन लागिएको हो ।”
चौध आयआर्जन समूह, आठ बालविवाह प्रतिकार समूह र १० विद्यालयमा किरोशी समूह बनाइएको सङ्गम म्याग्दीका कार्यक्रम संयोजक खिमा पुर्जाले बताउनुभयो । कार्यक्रम लागू भएका वडामा १० वर्षअघि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या ४६३ थियो ।
आयआर्जन समूहलाई घुम्तीकोष परिचालनका लागि रु ४८ देखि रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको सङ्गम म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले बताउनुभयो । सामूहिक जमानीका आधारमा सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो घुम्ती कोषबाट ऋण लिएर उनीहरुले बाख्रा, कुखुरापालन, सिलाइ व्यवसाय गरेका छन् ।